MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): January 2013
Gmail + Google Authenticator (ပိုမို စိတ်ချရတဲ့ Gmail Account ဖြစ်အောင်...)
Posted by MgHla မောင်လှ at 5:05 pm
ဒီ Gmail + Google Authenticator (ပိုမို စိတ်ချရတဲ့ Gmail Account ဖြစ်အောင်...) ပြုလုပ်တာဟာ လုပ်ရင်း အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ အတွက် အရေးမကြီးတဲ့ Gmail Account မှာ အရင်စမ်းစေချင်ပါတယ်။ Gmail Account locked ကျသွားတာမျိုး၊ ဝင်မရတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail Account များကို ပိုမို စိတ်ချရတဲ့ Gmail Account ဖြစ်အောင် ပြောင်းကြရအောင်ပါ... အဲဒီလို ပြောင်းဖို့ အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ Google Authenticator အင်စတော လုပ်ထားတဲ့ Android/iPhone/Blackberry handset (၁)လုံး၊ Google က ပြန်လည် ခေါ်ဆိုလို့ရမယ့် ဖုန်းလိုင်း (သို့) sms လက်ခံနိုင်မယ့် ဖုန်းလိုင်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက် တွေလိုအပ်ပါတယ်...
Google Authenticator ထည့်သွင်းထားသော android handset
ကျွန်တော်တို့ အခုလုပ်မယ့်ဟာကို Gmail မှာ 2-Setup Verification လို့ google က သုံးနှုန်းပါတယ်...
1. ကွန်ပျူတာကနေ Gmail ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ mail စစ်လို့ရ၊ ပို့လို့ရတဲ့ နေရာကို ရောက်ပြီဆိုရင် screen ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်က email လိပ်စာပေါ် click လုပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ pop up menu ထဲက Account ကို click လုပ်။
2. ပေါ်လာတဲ့ Accounts page ထဲက Security ကို click နှိပ်ပါ။
3. 2-step verification Status: OFF ရဲ့ ညာဘက်က Edit ကို click နှိပ်ပါ။
4. အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း Signing in with 2-step verification screen ထဲက Start setup ကို နှိပ်ပါ။
5. Set up your phone အဆင့်မှာ Google က ပြန်လည် ခေါ်ဆိုလို့ရမယ့် ဖုန်းလိုင်း (သို့) sms လက်ခံနိုင်မယ့် ဖုန်းလိုင်း နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာသုံးနေတဲ့ ဖုန်းတွေက နိုင်ငံခြားက ပို့တဲ့ sms လက်ခံလို့ မရသေးတဲ့အတွက် Voice Call ကို ရွေးပြီး Send code ကို နှိပ်ပါ။
6. Verify your phone အဆင့်မှာတော့ Google က ပို့လာတဲ့ sms (သို့မဟုတ်) ဖုန်းကပြောလိုက်တဲ့ နံပါတ် 6-လုံးကို ထည့်ပြီး Verify ကို နှိပ်ပါ။
7. Trust this computer အဆင့်မှာတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာက ကိုယ်ပိုင်သုံး ကွန်ပျူတာ ဖြစ်ရင်တော့ Trust this computer ကို အမှန်ခြစ် ခြစ်ပါ။ Username, Password သိရုံနဲ့ ဝင်ခွင့်မပြုချင်ရင်တော့ Trust this computer က အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပါ။ Gmail ကတော့ အခုလုပ်နေတာ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Trust this computer ကို အမှန်ခြစ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ Trust this computer ကို အမှန်ခြစ်ခဲ့ရင် အခု setting ချနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ+သုံးတဲ့ browser မှာဆိုရင် Gmail login ဝင်ရင် ပုံမှန် အတိုင်း Username + Password ၂-ခုနဲ့ပဲ login ဝင်လို့ရမှာပါ။
8. ဒီ Confirm အဆင့်မှာတော့ 2-setup verification ကို တကယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကို တကယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Confirm ကို နှိပ်ပါ။
9. ဒီအဆင့်မှာ ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားရမှာက Google Authenticator သုံးတဲ့ ဖုန်းပျောက်ခဲ့သည်ရှိသော် Gmail ကို ဆက်လက်သုံးနိုင်အောင် Show backup codes ကို နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ codes တွေကို သိမ်းထားပါ။
ကျွန်တော်တို့ Gmail login အတွက် verification code ထုတ်ပေးမယ့် အခါသုံးမယ့် ဖုန်း အမျိုးအစား Android - iPhone - BlackBerry ထဲက တစ်ခုခုကို ရွေးပါ။
ကျွန်တော်က Android ဖုန်းအမျိုးစားကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။
10. ကွန်ပျူတာ screen မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင် Google Authenticator app ထဲထားတဲ့ ဖုန်းကိုပါ လက်က ကိုင်ထားပါ။ :D ဒီအဆင့်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာကြည့်ရပါဦးမယ်။ ဒီအောက်က ပုံကို မှတ်ထားကြပါ။
11.Google Authenticator App ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖုန်းမှာ Google Authenticator app ကို ဖွင့်ပါ။ ကျွန်တော့် Android ဖုန်းမှာတော့ အောက်က ပုံစံ အတိုင်း မြင်ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက Scanabarcode ကို လက်နဲ့ တို့ထိလိုက်ပါ။ ကင်မရာရိုက်သလို လေးထောင့်ကွက် ပေါ်လာရင် ကွန်ပျူတာ screen မှာ ပေါ်နေတဲ့ အဆင့် (၁၀) က ပုံမှာ အနီနဲ့ဝိုင်း ပြထားတဲ့ လေးထောင့်ကွက်ကြီး နေရာက ပုံစံမျိုး (QR Code)ကို ချိန်လိုက်ပါ။
12. ဖုန်းပေါ်မှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ setup လုပ်နေတဲ့ Gmail လိပ်စာနဲ့ ဂဏန်း ၆-လုံးပါ code ကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ code ၆-လုံးကို အဆင့် (၁၀)က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ပေါ်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာ screen ထဲက Code: ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ပြီး Verify and Save ကို နှိပ်ပါ။
13. Google Authenticator setup successful တဲ့။ OK ကို နှိပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ကို login ဝင်မယ်ဆိုရင် Username နဲ့ Password သိရုံနဲ့ ဝင်လို့မရတော့ပါဘူး။ Google Authenticator app ထည့်ထားတဲ့ အခု ကျွန်တော်တို့ setup လုပ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းပါ ရှိမှ ဝင်လို့ရပါတော့မယ်။
14. ကျွန်တော်တို့ Google Authenticator အလုပ်လုပ်တာ စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။ အခု သုံးလက်စ browser မဟုတ်တဲ့ နောက်ထပ် browser တစ်ခုကို ဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။ https://mail.google.com ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပုံမှန်အတိုင်း Username နဲ့ Password တောင်းပါတယ်။ Sign In ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
15. ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လာပါပြီ။ 2-step verification ဆိုတဲ့ screen ပေါ်လာပါပြီ။ Enter code မှာ code နံပါတ်တွေ မှန်အောင် ရိုက်ထည့်မှသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်တော့မှာပါ။ အဲဒီ code ကို ဘယ်က ယူမလဲဆိုတော့ ခုနက ကျွန်တော်တို့ setup လုပ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းပေါ်က Google Authenticator ကိုဖွင့်ပါ။ အဲဒီမှာ အခုဝင်ရောက်တဲ့ Gmail လိပ်စာနဲ့ ကပ်ရပ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ ဂဏန်းတွေကို Enter code မှာရိုက်ထည့်ပါ။ Verify ကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ Gmail ထဲကို ဝင်ရောက် သွားမှာပါ။အခုသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ+browser မှာ ဒီကုဒ်ကို နောက်ထပ် ဝင်တိုင်း ဝင်တိုင်း ထပ်မရိုက်ချင်ရင်တော့ Trust this computer ကို အမှန်ခြစ် ခြစ်ပါ။
ဖုန်းပေါ်ရှိ Google Authenticator တွင် Verify code ထုတ်ပေးပုံ
ယင်း verify code သည် တစ်မီနစ်ကို တစ်မျိုးပြောင်းသည်။
ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ Google Authenticator နဲ့ Verify Code ထုတ်ဖို့ အတွက် Gmail Account တစ်ခုထက်မက setup လုပ်ထားနိုင်ပါ။
iPhone ပေါ်က Google Authenticator မှာ
Google Account တွေ setup လုပ်ထားတာပါ။
- အဆင့် (၇) တွင်
Gmail ကတော့ အခုလုပ်နေတာ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Trust this computer ကို အမှန်ခြစ်ခိုင်းပါတယ်။
ထပ်ဖြည့်ထားသည်။ 21-Jan-2013 9:30AM
မန္တလေးသားထုတ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် smart phone နဲ့ ကျွန်တော်...
Posted by MgHla မောင်လှ at 2:45 pm
HTC ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Peter Chou ခေါ် ဦးဝင်းသန်း ဟာ မန္တလေးမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ တရုတ်လူမျိုး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့ အ.ထ.က (၁၃) မှာ အထက်တန်း၊ ဒေသကောလိပ်၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ်မှာ ရူပဗေဒ အဓိကဘာသာရပ်ဖြင့် ပညာသင်ယူဖူးကြောင်း 15-Jan-2013 ရက်နေ့က Sedona Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Press Launch of HTC's first concept store and service center in Mandalay မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအပြင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး၊ အဆင့်မြင့်ဆုံး မြန်မာ smart phone ကို မန္တလေးက လုပ်ခဲ့တာပါဆိုပြီး ယင်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ အတွက် မန္တလေးသား ထုတ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် smart phone လို့ ကျွန်တော် သုံးလိုက်တာပါ။ ဦးသောင်းတင် (KMD)၊ ဦးသိန်းထွတ် (eVolver)၊ ဦးထွန်းမြင့် (စံမြန်မာစာ၊ မင်းကွန်ပျူတာ) တို့နဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်တယ်လို့ ယင်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
HTC CEO Peter Chou (ဦးဝင်းသန်း)နှင့် ဦးစိုးငွေရ (KMD)
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ HTC Butterfly, HTC One X+, HTC One, HTC Desire X, HTC Desire VC, HTC Desire C model ၆-မျိုးကို ၁၅-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ စတင် ရောင်းချမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ HTC Desire VC က GSM နဲ့ CDMA800 လိုင်းကဒ် ၂-ကဒ် ထည့်သုံးနိုင်တဲ့ အမျိုးစားဖြစ်ပြီး ကျန်အမျိုးအစားများကတော့ GSM/WCDMA လိုင်းကဒ် ထည့်သုံးရတဲ့ အမျိုး အစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစတင်ရောင်းချတဲ့ HTC အမျိုးအစားများမှာ မြန်မာစာ font များနဲ့ လက်ကွက် တစ်ပါတည်းပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ စာရိုက်တဲ့ လက်ကွက်အနေမှာ စံမြန်မာ လက်ကွက်ဖြစ်ပြီး Zawgyi-One, Myanmar3နဲ့ စံမြန်မာစနစ် အသုံးပြုထားတဲ့ web site များကို ကြည့်ရှုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခင်က ပြည်တွင်းကိုရောက်နေတဲ့ HTC android handset များကို မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်တဲ့ ROM ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးဖို့ လတ်တလော အစီအဉ် မရှိသေးကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါတယ်။ တရားဝင်ဖြန့်ချိခွင့်ရှိသူ KMD နဲ့ စံမြန်မာ လက်လီရောင်းချတဲ့ ဆိုင်များ အပါအဝင် HTC Concept Store များမှ ဝယ်ယူပါက Warranty ၁၈-လ ပေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ HTC ရဲ့ တီဗီကြော်ငြာကိုလည်း ပြခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ် တစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ Android မြန်မာ လက်ကွက် စနစ်နဲ့ စံမြန်မာ လက်ကွက်စနစ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့ ပြကွက်ကို ဘဝင်မကျမိတာက လွဲလို့ HTC ရဲ့ TV ကြော်ငြာကို သဘောကျပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာကြောင့် Peter Chou (ဦးဝင်းသန်း) ကို အတုယူလေးစားပြီး ကြိုးစားမယ့် လူငယ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းကို ဖြန့်ချိရောင်းချမယ့် HTC smart phone နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို http://www.htc.com/mm/ မှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီပွဲတက်ရောက်ဖို့အတွက် ဖိတ်စာပို့ပေးတဲ့ မမြတ်မွန်ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gmail + Google Authenticator (ပိုမို စိတ်ချရတဲ့ Gm...
မန္တလေးသားထုတ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် smart phone နဲ့ ကျွန်တေ...